एन आई सी बैंक आफैले ग्राहकको खाता बाट दुइ`पटक पैसा निका`ल्यो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Banking News/एन आई सी बैंक आफैले ग्राहकको खाता बाट दुइ`पटक पैसा निका`ल्यो !
एन आई सी एशिया बैंकमा राखिएको पैसा बैंक खाताबाटै ग्राहक लाई थाहै नदिएर सु`टुक्क बैंक आफैले निकालेको छ । बैंक खाताबाट रकम हराए पछि खोजि गर्दै जाँदा रकम बैंक आफैले निकालेको भेटिएको हो । रकम झिकिएको सूचना पाएपछि खातावाल सो को खोजि गर्दै बैंक पुगेका हुन् ।
आफैले पैसा झिकेपछि पैसा किन झिकियो भन्ने कारण माग गर्दा बैंकले कारण दिन सकेको छैन । बैंकको खातामा राखिएको रकम एकाएक गायब भएपछि खोजि गर्दै जाँदा बैंक आफैले रकम झिकेको पत्ता लागेको पीडित ग्राहकले बताएका छन् ।
एन आ ईसी एशिया बैंकको लहान सिरा`हामा एक संस्थाको नाममा रहेको करिव ३ लाख रुपैयाँ एनआईसी एशिया बैंकले खाता`वालालाई थाहै नदिई रकम निकालेको हो ।
बैंकिङ खबरका अनुसार बैंकबाट स्टेटमेन्ट ल्याउँदा रकम हराएको पाइए पछि रकमको खोजि भएको थियो । रकम खोज्ने क्रममा उक्त रकम बैंक आफैले निकालेको भेटिएको खतावालले जनाएका छन् ।
उक्त स्टेटमेन्ट अनुसार ग्राहकको खाताबाट बैंकले दुइ पटक गरी रकम निकालेको छ । खाता`वालाले रकम खोजि गर्ने क्रममा खाताबाट रकम गायब भएपछि बैंकसँग स्टेटमेन्ट माग गर्दा पटकपटक गरी रकम निकालेको स्टेटमेन्टमा देखि`एको छ ।
असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज अब एक वर्ष सम्ममा तिर्न सकिने